Wasiir Xoosh :Cududaar Maran – Maqaal • Horseed Media
You are here: Home / Opinion / Wasiir Xoosh :Cududaar Maran – Maqaal
Wasiir Xoosh :Cududaar Maran – Maqaal
August 6, 2017 - By: HORSEED STAFF
Warbixintan kooban waxaan uga hadli doonaa khilaafkii garsoorka,Wasiir Xoosh iyo Baarlamaanka.
Dhacdadii Sabtidii dhaweyd dhexmartay Barlamaanka iyo Wasiir Xoosh wax badan baa ka dhex muuqday oo laga baran karaa. Anniga waxay iila ekayd riwaayad an ugu magac bixin lahaa”Kala-Maadasho”. Riwaayaddaas Barlamaanku waxay ku matalayeen “Ma Tabcade Bur Weyne ” oo ah nin Jaahil ah oo naxariis daran oo cid kasta oo uu ka xoog badan yahay u hanjaba, dila oo dhaca. Iyo,Wasiir Xoosh oo ku Matalayey “Wadaad Xume” oo ah Xaakim danley ah oo is-waafajiya dantiisa gaar iyo sharciga -sida kii xukumay “La Jiifiyanaa Bannaan”!!!
Barlamaanku waxay isku mar qafaal ahaan u qabsadeen Go’aankii Maxkamadda Sare,Xilkii Wasiirnimada Xoosh,Miisaniyaddii dawladda iyo Xasilloonodii Siyaasadda Dalka.Intaas kadib, waxay ku hanjabeen inay ka sii dari doonaan haddaan la laauushin oo weliba madax-salaax loogu darin.Qiyaastayda:Malaha garan mayaan inaan xuquuqda iyo xilka muwaadinka, miisaniyadda iyo xasilloonida dalka inuusan midkoodna gelin gorgoro siyaasadeed.
Wasiir Xoosh oo xubin firfircoon ku matali jirey riwaayadihii hore ee Barlamaanku ku ridi jirey dawladaha, Sabtidii dhaweyd wuxuu matalayey “Wadaad-Xume” dantiisa oo keliya u taagan.Wuxuu bixiyey cududaar maran oo nuxur lahayn asagoo ka gaabsaday inuu ka jawaabo su’aashii rasmiga ahayd oo taagneyd ee ahayd:Barlamaanku ma jebin karaa go’aanka sharciga ah ee Maxkamadda Sare? Cududdarkani wuxuu dhaawacay sharafta iyo hey’badda Wasiirka . Waxaase dalku halis galayaa marka Wadaaad-Xumanimadu iyo daneysigu ay saameyso diyaarinta Dastuurka Qaranka!!
Dhacdadii Sabtidii waa lagu kala rogmaday ee laguma heshiin lagumana kala adkaan.Dalku wuxuu u baahan yahay xal waara oo sharci ku dhisan. Hiigsiga dawladdu waa Danta Dalka iyo Dadka.Aragtida Barlamaanka iyo tallada hogaankiisa midna ma gaarsiisna heer qaran. Allow kii roon reerka u reeb.
Dhaqanka Barlamaanku wuxuu u eg yahay maahmaahdii Murtida Maanta ee Yusuf Sheikh Ali Samantar ee ahayd “Hargo maran wade ,hawli kama harin,habaar-na u dheer “.
Qore: : Ahmed-nur Mohamed